Scleroderma (စကာလရိုဒါးမား) : ရောဂါလက္ခဏာတွေ၊ ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေနဲ့ ကုသမှုတွေအကြောင်း Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Scleroderma (စကာလရိုဒါးမား)
Scleroderma (စကာလရိုဒါးမား) ကဘာလဲ။
စကာလရိုဒါးမားဆိုသည်မှာ ဆက်တွယ်တစ်ရှူးများနှင့် အရေပြားတစ်ရှူးများကို မာကြော တောင့်တင်းသွားစေသော ရောဂါများကိုစုခေါ်သည့် နာမည်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ စကာလရိုဒါးမားလက္ခဏာများမှာ အရေပြား၌ထင်ရှားသော်လည်း လူများစွာတွင် သွေးကြော၊ ကလီစာများနှင့် အစာချေလမ်းကြောင်းတို့တွင်သာ ထိခိုက်မှုများ၏။ လက္ခဏာများမှာ မတူတတ်ပါ။ ရောဂါဖြစ်နေသော အင်္ဂါပေါ်တွင်မူတည်ကာ ပြောင်းလဲတတ်ပါသည်။
စကာလရိုဒါးမားအဓိကပုံစံနှစ်မျိုးရှိသည်- တစ်နေရာတည်းဖြစ်သော စကာလရိုဒါးမား နှင့် စနစ်အလိုက်ထိသော စကာလရိုဒါးမား
တစ်နေရာတည်းဖြစ်သော အမျိုးအစားမှာ ခန္ဓါကိုယ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုသာ ထိသည်။ များသောအားဖြင့် အရေပြားတစ်ရှူး။ အဓိကအင်္ဂါကြီးများကို အန္တရာယ်ပေးလေ့မရှိပါ။ ဖြစ်ရပ်အများစုတွင် သူ့အလိုလိုပျောက်သွားပြီး ပြင်းထန်သောဖြစ်ရပ်များတွင်တော့ အရေပြားပျက်စီးနိုင်ပါသည်။
စနစ်အလိုက်ထိသောအမျိုးအစားမှာ တစ်ကိုယ်လုံးကိုထိခိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး အရေပြား၊ အရေပြားအောက်မှတစ်ရှူးများ၊ သွေးကြောများနှင့် အဓိကအင်္ဂါကြီးများကို ထိခိုက်လေ့ရှိသည်။
Scleroderma (စကာလရိုဒါးမား) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
စကာလရိုဒါးမားသည် အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများတွင် အဖြစ်များသည်။ များသောအားဖြင့် အသက် ၃၀ မှ ၅၀ အတွင်းဖြစ်လေ့ရှိသည်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိနိုင်ရန်အတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။
Scleroderma (စကာလရိုဒါးမား) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
စကာလရိုဒါးမား၏ ရောဂါလက္ခဏာများမှာ ထိခိုက်နေသော ကိုယ်အစိတ်အပိုင်းပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲတတ်ပါသည်။
မာကျောထူထဲလာသော တစ်ရှူးများကြောင့် ပြောင်တင်းချောမွတ်သလို ထင်နေရသည့် အရေပြား။ များသောအားဖြင့် လက်နှင့် မျက်နှာတွင်တွေ့ရသည်။
အေးစက်သော ခြေချောင်း လက်ချောင်းများမှ အနီရောင်၊ အဖြူရောင် သို့မဟုတ် အပြာရောင် ပြောင်းလဲသွားသည်။ ထိုအခြေအနေကို ရေးနော၏ဖြစ်ရပ်ဟုခေါ်၏။
လက်ချောင်းထိပ်များတွင် နာခြင်း သို့ အနာပေါက်ခြင်း
မျက်နှာနှင့်ရင်ဘတ်တွင် အနီစက်များထခြင်း။ ၎င်းတို့သည် တီလန်ဂျီတေးစီးယားဟုခေါ်သော သွေးကြောအပွင့်လေးများဖြစ်သည်။
ဖောင်းကြွ၊ နာကျင်သော ခြေချောင်း လက်ချောင်းများ
ဖောင်းကြွ ရောင်ရမ်းသော အဆစ်များ
မျက်လုံး၊ ပါးစပ်ခြောက်သွေ့ခြင်း (Sjogren’s syndrome) ဟုခေါ်သည်။
လက်နှင့်ခြေထောက်တွင် ဖောင်းကြွြုခင်း (Edema)
Scleroderma (စကာလရိုဒါးမား) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
စကာလရိုဒါးမားဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းကို ယခုထိမသိရသေးပါ။ တစ်ချို့သော သိပ္ပံပညာရှင်များက ၎င်းမှာ ကိုယ်ခံအားစနစ် မှုမမှန်ရာမှ ဗိုင်းရပ်စ်များ ဘက်တီးရီးယားများကို တိုက်ခိုက်မည့်အစား ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်တိုက်ခိုက်ရာမှာ ဖြစ်လာခြင်းဟု ယူဆကြ၏။
Scleroderma (စကာလရိုဒါးမား) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
စကာလရိုဒါးမားမှာ ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိသလို တစ်ဦးစီတွင်ထိသော ခန္ဓါကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများလည်း မတူညီသောကြောင့် ရောဂါအတည်ပြုရန် ခက်ခဲ၏။
ဆရာဝန်သည် အရေပြားကိုထိသော စကာလရိုဒါးမားလက္ခဏာများကို ရှာကြည့်ပါလိမ့်မည်။ သွေးတွင်းမှ ကိုယ်ခံအားစနစ်မှထုတ်သော ပဋိပစ္စည်းပမာဏကိုစစ်ဆေရန် သွေးစစ်ဖို့လိုနိုင်ပါသည်။ ခန္ဓါကိုယ်တွင် တခြားနေရာများထိမထိသိနိုင်ရန်အတွက် အသက်ရှုစနစ်ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးခြင်း (Pulmonary function tests)၊ အဆုတ်အတွက် ကွန်ပျူတာဓါတ်မှန်၊ နှလုံးအတွက် ပဲ့တင့်သံဓါတ်မှန်တို့ ရိုက်ရန်လိုနိုင်ပါသည်။ ထိခိုက်နေသည့် အရေပြားကို နမူနာဖဲ့ယူကာ မူမမှန်မှုများကိုစစ်ဆေးရန် ဓါတ်ခွဲဖို့ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Scleroderma (စကာလရိုဒါးမား) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
စကာလရိုဒါးမားအတွင် ကုသမှုဆိုတာမရှိပါ။ သို့သော် လက္ခဏာများကို သက်သာအောင်လုပ်နိုင်ပါသည်။ သောက်ဆေးများသည် စကာလရိုဒါးမားအတွက် ပထမဆုံးရွေးချယ်ရသည်များဖြစ်၏။
NSAIDs (စတီးရွိုက်မပါ အရောင်ကျဆေးများ –ibuprofenoraspirin) နာကျင်ရောင်ရမ်းမှုကို သက်သာစေပါသည်။
ကိုယ်ခံအားကိုထိန်းချုပ်ရန်အတွက် စတီးရွိုက်နှင့် တခြားဆေးများ။ ၎င်းတို့သည် ကြွက်သား၊ အဆစ်၊ အတွင်းပိုင်းအင်္ဂါပြဿနာများအတွက် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
လက်ချောင်းများသို့သွေးစီးဆင်းမှုကို ကောင်းမွန်စေသော ဆေးများ
အဆုတ်မှသွေးကြောများကို ပွင့်စေသောဆေးများ သို့မဟုတ် တစ်ရှူးများတွင် အမာရွတ်မကျန်စေသော ဆေးများ
ထိုဆေးများအပြင် လက္ခဏာများကိုလျော့ချနိုင်ရန် ဆရာဝန်မှ တခြားကုထုံးများကို လမ်းညွှန်နိုင်ပါသေးသည်။
ပြင်းထန်သော အင်္ဂါထိခိုက်မှုရှိပါက ထိုအင်္ဂါအား အစားထိုးခြင်း
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက စကာလရိုဒါးမား ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနှင့်အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် စကာလရိုဒါးမား ကိုကုသတဲ့နေရာနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေသောနေရာများတွင် အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်။
တက်တက်ကြွကြွနေပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည် သင့်ခန္ဓါကိုယ်အား သန်မာအောင် ရောဂါအမျိုးမျိုးကိုဆန့်ကျင်ပြီး ကျန်းမာအောင် ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းသည် သွေးလှည့်ပတ်မှုကိုကောင်းစေပြီး တောင့်တင်းခြင်းများကို သက်သာစေပါသည်။ ထို့အတူ အဆစ်များကိုလည်း ပျော့ပျောင်းစေပါသည်။
ဆေးလိပ်မသောက်ပါနှင့်။ နီကိုတင်းသည် သွေးကြောနှင့် အဆုတ်တစ်ရှူးများကို မာစေနိုင်သည်။ ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်ခက်နေပါက ဆရာဝန်ဆီအကူအညီတောင်းပါ။
ရင်ပူခြင်းကို စီမံပါ။ အက်စစ်များပြန်ကန်တက်ခြင်းကြောင့် ရင်ပူရာမှ အစာရေမျိုပြွန်ကို ထိခိုက်စေပါသည်။ ရင်ပူစေသောအစာများ ဂက်စ်ပါသည်များကို ရှောင်ပါ။ အစားအများကြီးစားခြင်း၊ ညအခါနောက်ကျမှ စားခြင်းမျိုးကို မလုပ်ရပါ။ ပြန်ကန်ခြင်းမဖြစ်စေရန်အတွက် အိပ်သည့်အခါ ခေါင်းသည် ရင်ဘတ်ထက်မြင့်နေရန် လိုအပ်ပါသည်။ အကယ်၍အထက်ပါနည်းများဖြင့် အဆင်မပြေသေးပါက အန်းတဆစ်များကို သုံးနိုင်ပါသည်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း နိုဝင်ဘာ 27, 2019
Scleroderma. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/scleroderma/home/ovc-20206014. Accessed August 12, 2016.
Scleroderma: Main Types & Top Questions Answered. http://www.webmd.com/pain-management/scleroderma. Accessed August 12, 2016.